डेण्टल इम्प्लान्ट्स कृत्रिम दन्त प्रत्यारोपण के हो ? यस्तो भन्छिन् पेरियोडोन्टिष्ट/ओरल इम्प्लान्टोलोजिष्टर डा.मनिशा न्यौपाने - Mahendranagar Post
Home Top News डेण्टल इम्प्लान्ट्स कृत्रिम दन्त प्रत्यारोपण के हो ? यस्तो भन्छिन् पेरियोडोन्टिष्ट/ओरल इम्प्लान्टोलोजिष्टर...
कैलाली-दाँत समग्र स्वास्थ्यका लागि अभिन्न अंग हो। सौन्दर्यको मानक त हुँदै हो।दाँत हाम्रो समग्र व्यक्तित्वको सौन्दर्य हो। तर, सौन्दर्य मात्र पनि होइन। त्यो भन्दा गहिरो साइनो स्वास्थ्यसँग छ। दाँत स्वस्थ्य र बलियो भयो भने हाम्रो पाचन प्रक्रियालाई फाइदा गर्छ। शरीरमा पाचन प्रक्रियाको क्रम दाँतबाट सुरु हुन्छ।
दाँतले चपाएपछि, टुक्राएपछि खानेकुरामा पाचन रस मिसिएर आन्द्रा हुँदै शरीरभित्र पुग्छ। तर, अहिले धेरैको दाँत कमजोर, अस्वस्थ्य हुँदै गएको छ। उमेर नपुग्दै दाँत खिइने, कमजोर हुने, किरा लाग्ने, टुक्रिने, मक्किने जस्ता समस्या देखापर्न थालेका छन्।
दाँत सम्वन्धी यी र यस्तै समस्याहरुको निराकरण गर्नका लागि धनगढीको मुख्य सडकमा रहेको नोभा हस्पीटल प्रालीले अत्याधुनिक प्रविधीसहितको दन्त प्रत्यारोपण कार्यको सुरुवात गरेको छ। यो अस्पतालले सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक दन्त प्रत्यारोपण सम्वन्धी विशेषज्ञबाट सेवा दिन सुरु गरेको हो। यसै सम्वन्धी ओरल इम्प्लान्टोलोजिष्ट डाक्टर मनिशा न्यौपानेसँग महेन्द्रनगर पोष्टले कुराकानी गरेका छ।
दन्त प्रत्यारोपण भनेको जरा रोप्नु हो। दाँत नभएको ठाउँमा दाँत राख्ने काम हो। दन्त प्रत्यारोपण विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। यो प्रविधीमा मानिसको दाँत नभएको खाली ठाउँमा दाँतको कृत्रिम जरा रोपिन्छ।
प्रविधीबाट दाँत हेर्दा सुन्दर देखिने मात्रै होइन सक्कली दाँत जस्तै बलियो र चपाउन पनि सजिलो हुन्छ।त्यो जरा चाहि टाइटेनियमको हुन्छ। त्यो सुरक्षित मानिन्छ। दाँतको हड्डीमा जहाँ खाली भाग हुन्छ। जुन ठाउँमा दाँत मिसिङ छ। त्यहाँ चाहि टाइटेनियमको जरा फिट गरेर केही समयमा लागि छोडिन्छ। ३ देखि ४÷६ महिनासम्म छोड्ने गरिन्छ। विस्तारै त्यसको वरिपरि हड्डीहरु बन्दै जान्छ।
त्यसलाई ओस्टोयोइन्टीग्रेशन भनिन्छ। विस्तारै त्यो हड्डी बनी सकेपछि त्यो जरा चाहि टाइटेनियम पुरै फिक्स हुन्छ। त्यसको माथिपट्टी नक्कली दाँत (क्राउन) राखिन्छ। यसैगरि कसैको एउटा दाँत मात्रै मिसिङ भएको छ वा तत्काल दुर्घटना भई दाँत झरेको अवस्थामा पनि इम्प्लान्ट राख्न सकिन्छ।
गिजा सम्वन्धी रोगको बारेमा कसरी थाहा पाउने ?
धेरै जस्तो विरामीलाई थाहा नै हुँदैन। गिजाको समस्या छ की छैन ? भन्ने कुरा। थापा नै नभएर पछि कतिपयले उपचार पनि गर्दैनन्। गिजा रोगलाई नै हामी पायरिया पेरियोडोन्टाइटिस रोग भन्छौं। यसका थुप्रै लक्षण हुन्छन्। जस मध्ये पहिलो लक्षण गिजाबाट रगत आउनु हो।
केही खानेकुरा खाँदा, ब्रस गर्दा, केही अड्कीएको छ भने रगत आउँछ। त्यसपछि गिजामा समस्या देखिन्छ। प्राय जस्तो ब्रस गर्दा र खानेकुरा खाँदा अड्कीएर गिजाबाट रगत आएको भन्ने सोच्छन् तर त्यस्तो भने होइन्। गिजा स्वस्थ छ भने रगत आउँदैन।
मुख्य कारण भनेको गिजाको लाईनिङ संक्रमण भएपछि रगत आउँछ। कतिपयलाई श्वास गनाएको पनि आफुलाई अनुभव हुँदैन। दाँत राम्रोसँग माझिएन भने दाँतमा लेउ लाग्छ। यसलाई ‘पलाग’ भनिन्छ। त्यसमा थुप्रै किटाणु अथवा व्याक्टेरिया जम्मा हुन्छन्।
उक्त व्याक्टेरियाले विभिन्न प्रकारका भोलाटायर सल्फर कम्पाउण्ड उत्पादन गर्छ। त्यो उत्पादन गरेका कारणले मुखमा गनाउने हुन्छ। अर्को कारण भनेको दाँतको बीचको ग्याप, गिजा तल सर्नु, सुरुमा संक्रमण भएको बेला हाम्रो गिजामा मात्र संक्रमण हुन्छ।
विस्तारै गिजाबाट हाम्रो जुन दाँतलाई समातेको हड्डी हुन्छ।संक्रमण बढ्दै गएपछि दाँत हल्लीन थाल्छ। दाँतको बीचको ग्याप पनि देखापर्छ। त्यसपछि खानेकुरा खाँदा गाह्रो हुन्छ। हामीले अन्य चिकित्सकको कहाँ गएर चेकजाँच गराउने हाईन् विशेष गरि गिजा तथा दन्त प्रत्यारोपण विशेषज्ञसँग नै उचार गर्ने हो।
गिजा सम्वन्धी समस्या कुन उमेर समूहलाई देखापर्न सक्छ ?
गिजा रोग पेरियोडोन्टाटिस हो। उमेर भन्दा पनि जसको दाँत फोहोर हुन्छ। सफा राख्दैन भने त्यसलाई गिजा सम्वन्धी रोग लाग्छ। तर ब्रस गर्ने तरिका ठिक नभएपनि दाँत सफा भएको मानिदैन। दाँतलाई प्राय ६/६ महिनामा चेकजाँच गराई राख्नुपर्छ। अनि मात्रै थाहा हुन्छ रोग लागेको छ की छैन भनेर। केही खानेकुरा खाईसकेपछि कुल्ला गर्ने र धुमपान र सुर्तीजन्य बस्तुहरुको प्रयोग गर्नु हुँदैन।
गिजा रोगको उपचारका लागि नोभा अस्पतालमा कस्तो छ सेवा ?
गिजा रोग दुई प्रकारको हुन्छ। जुन एउटा सामान्य र अर्को जटिल हुन्छ। सामान्य भनेको गिजामा मात्रै सिमित रहन्छ। त्यस्तो विरामीले दन्त चिकित्सकसँग सफा गराएपछि ठिक हुन्छ। यदी सामान्य उपचार गर्दा पनि ठिक नभएपछि हड्डीमा संक्रमण हुन्छ। यदी उपचार गरेन भने बढ्दै गएर हड्डीमा संक्रमण हुन्छ। त्यसलाई पेरियोडोन्टाइटिस भनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पेरियोडोन्टिष्टलाई नै देखाउनुपर्छ।
गिजा रोगबाट बच्ने उपाय के हुन् ?
गिजा रोगको समाधान एकदमै सजिलो छ। जति सक्दो हामीले गिजामा लेउ बस्न नदिने हो। जति व्याक्टरेरिया पुरानो हुँदै गयो त्यति नै त्यो व्याक्टेरिया पुरानो हुँदै जान्छ। संक्रमण बढ्दै जान्छ। त्यस कारण राम्रोसँग ब्रस गर्ने, फलसिङ गर्ने बानी बसाउने जस्ता उपाय अपनाएमा गिजामा हुने समस्या सामाधान हुन्छ।
Previous articleशुक्रवारको मौसमः सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही भागमा भारी वर्षा सम्भावना
Next articleराष्ट्रपति जो बाइडनले कोरोना खोप लगाउनेलाई १०० डलर दिने घोषणा